सेयर के हो ? कहिले आउँछ बजारमा ? कसरी गर्ने लगानी ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > सेयर के हो ? कहिले आउँछ बजारमा ? कसरी गर्ने लगानी ?
सेयर के हो ? कहिले आउँछ बजारमा ? कसरी गर्ने लगानी ?
एकपटकमा ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई सेयर निष्कासन गर्नुपरेमा कम्पनीहरू प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओमा)मा जान्छन् । यसरी आईपीओमा जानुभन्दा अघि कम्पनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्दा इक्रा नेपालबाट पनि रेटिङ गराउनुपर्छ । यी दुई संस्थाको वेबसाइटबाट पनि कुन कम्पनीको सेयर आउँदै छ भन्नेबारे लगानीकर्ताले जानकारी लिन सक्छन् ।
आईपीओ जारी गर्नुभन्दा १ साताअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूले आह्वानपत्र निष्कासन गर्छन् । यो आह्वानपत्रमा कम्पनीले कति सेयर, कुन मितिदेखि निकाल्दै छ भन्ने जानकारी दिन्छ । आह्वानपत्रले कम्पनीको सेयरमा कतिसम्म र कहाँबाट आवेदन सकिन्छ भन्नेबाहेक कम्पनीको हालको स्थिति र भविष्यको योजनासमेत उल्लेख गरेको हुन्छ । आह्वानपत्र राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नेले त्यहीँबाट पनि कम्पनीको धेरै जानकारी पाउँछ । यस्तो आह्वानपत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको हुँदा लगानीकर्ता विश्वसनीयतामा भर पर्न सक्छन् ।
आह्वानपत्रमा उल्लेख भएको सेयर विक्री प्रबन्धक वा तोकिएका सङ्कलन केन्द्रबाट आईपीओमा लगानी गर्न फारम पाइन्छ । फारममा लगानीकर्ताले कति कित्ता सेयर लिन चाहेको हो, उल्लेख गरेर आफ्नो बारेमा मागिएको जानकारी पनि भर्नुपर्छ । सेयर फारममा हस्ताक्षरसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । पछि नगद फिर्ता लिँदा हस्ताक्षर मिल्नुुपर्ने भएकाले स्पष्ट र चल्तीकै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
फारम भर्नेको बैङ्क खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मागेको भन्दा कम सेयर परेमा वा सेयर नपरेमा त्यही खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने गरी विक्री प्रबन्धकले एकाउण्टपेयी (अर्थात् खातामै रकम जाने) चेक जारी गरिदिन्छ । फारम भर्न जाँदा आफ्नो पासपोर्ट साइजको दुईप्रति फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्रसमेत सङ्कलन केन्द्रमा देखाउनुपर्ने भएकाले साथमै बोक्नुपर्छ । निश्चत सीमाभन्दा बढी रकमको सेयर माग गर्दा आम्दानीको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भने एकाउण्टपेयी चेकबाटै भुक्तानी दिनुपर्छ ।
१७ जेठ २०७३, ४.००
२०७३ जेष्ठ १७ गते १६:३० मा प्रकाशित
आउने भो प्राइम कमर्सियल बैंकको सवा करोड बढी सेयर !
चार सय नेपालीलाई अमेरिका पुर्याउने व्यापार मेला
तपाईसँग बैंकको सेयर छ या किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
४५७ ग्राम सुनसहित मानिस पक्राउ
सय रुपैंया अंकित एक करोड ५० लाख ८८ हजार ८७ कित्ता सेयर निष्काशनबारे जानिराख्नोस् !
भीभीआईपी भ्रमणले धर्ती र आकाश सबैतीर ट्राफिक जाम !